यिनै हुन् विशाल चौधरी अपहरणको योजनाकार – Tharuwan.com
यिनै हुन् विशाल चौधरी अपहरणको योजनाकार
प्रहरीले भन्दा पनि उनले पत्याएनन्, राजु (विक)ले कसरी विशाललाई अपहरण गर्ला र ? पत्याउनु पनि कसरी ? बाल्यकालको साथी, अहिले पनि उस्तै दोस्ती छ । १२ गते छोरो अपहरणमा परेको केहीबेरपछि नै राजु खोजीमा सघाउन आएको थियो । विशाललाई खोज्दै स्कुल पुगे, नाराबाजी गरे, राति अबेरसम्म पनि साथ दिए ।
प्रहरीले राजु विक र विष्णु पाण्डेलाई लगेपछि विशालले मुख खोले, ‘मैले कसरी पत्याउँ सर । एउटै थालमा खाने साथीले आफ्नो छोरालाई अपहरण गर्‍यो भनेर ?’ प्रहरीका अनुसार आफ्नै साथीका ५ वर्षे छोरा विजयलाई राजु आफैंले स्कुलबाट उठाएका थिए । उनलाई विष्णु पाण्डेले साथ दिएका थिए । घरमा सँगै आउजाउ गर्ने बुबाको साथी देखेपछि विजय पनि सहजै उनीहरुसँग गरे ।
लगातार केही दिन राजु विकले अपहरणकारी र खोजीकर्ता दुबै भूमिका निभाइरहे । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले शनिबारबाट केस हृयाण्डल गर्‍यो र अपरेशन बुनु नाम दिएर अनुसन्धान थाल्यो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा नै राजु विक शंकाको घेरामा परिसकेका थिए । तर, विजयले विश्वास नै गरेनन् । भन्छन्, ‘कसरी शंका गर्नु । सँगै खोज्न हिडेको छ । आफ्नै एकदमै मिल्ने साथी पनि हो ।’
तर, उनी त्यहीँ फसे । प्रहरीले विजय दम्पत्तिलाई एक होटलमा राखेर निगरानी गरिरहेको थियो र झण्डै ३ घन्टाका लागि मात्र उनीहरुलाई बाहिर पठाइएको थियो । त्यही बेला विशालले राजुलाई भने, प्रहरीले अपराधीलाई जहाँ भेट्यो, त्यही सुट गर्ने भनेको छ । मैले पनि छोरा माया मारिसके, तर, अपराधीलाई छोड्नु हुन्न ।’
राजपालाई चुनावमा जान दबाब, लेखी भन्छन्- ‘माग सम्बोधन नभएसम्म जानु हुँदैन’
थारु भाषाको चलचित्र ‘लाज’ अमेरिकामा हुने फिल्म महोत्सवमा छनौट
One thought on “यिनै हुन् विशाल चौधरी अपहरणको योजनाकार”
Anyaai ma pareka harek manish le nyai paunu parchha. Esko lagi rajje le ek kadam pani pachhi hatnu hunna.